किन चल्दैनन् नेपाली फिल्म? « Lokpath
किन चल्दैनन् नेपाली फिल्म?
प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आईतवार ०८:२७
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली फिल्मले हलमा दर्शक पाएका छैनन् । पहिलो त जाडोको मौसममा हलसम्म दर्शक आउन अल्छी मान्छन् । अर्कातिर दर्शकले चाहेजस्ता फिल्म रिलिज भएका छैनन् ।
केही दिनअघि रिलिज भएका र चल्ने भनेर आँकलन गरिएका तीन फिल्म ‘गोपी’, ‘रणवीर’ र ‘सयकडा दश’ तिनै फिल्म चलेनन् । दर्शकको साथ पाउन नसकेपनि फिल्म ‘रणवीर’ ले ठीकै व्यापार ग–यो । समीक्षक र फिल्म बुझेको टिमले बनाएको फिल्म भनिएको ‘गोपी’ ले समीक्षात्मक रुपमा पनि गाली पायो ।
अहिले हलमा चलिरहेको ‘समर लभ’ मा पनि दर्शक ओइरिएका छैनन् । तर, निर्देशक मुस्कान ढकालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो फिल्मलाई हेर्न दर्शक ओर्लिएका छन् । दर्शकको माउथ पब्लिसिटीले फिल्म चल्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, समीक्षात्मक रुपमा भने यो चलचित्रले पनि औसत प्रतिक्रिया पायो ।
यी मात्र होइन, केही वर्षयता नेपाली फिल्म हेर्ने दर्शकको खडेरी परेको छ । फिल्म विश्लेषकका अनुसार यसरी फिल्म नचल्नुको कारण अरु नभएर फिल्ममेकरकै कमजोरी हो । यहाँको बजार यतिसम्म लापरवाही छ कि, फिल्म राम्रो बनेर हलमा आए पनि त्यसको व्यापार गर्न सक्दैनन् ।
राम्रो प्रचार र फिल्मबाट कमाइ खाने सीमित निर्माता तथा टिमबाहेक अरु फिल्मकर्मीका फिल्म घाममा सुक्छन् ।
केही हप्ताअघि मात्र रिलिज भएको फिल्म ‘गरुड पुराण’ को पनि हालत यस्तै भयो ।
सम्भावना बोकेको टिम र चलेका कलाकार लिएर फिल्म बनाइएको थियो तर फिल्म फ्लप भयो । फिल्म रिलिजअघि राम्रो फिल्म र कथा छ भनेर दाबी गर्ने यो फिल्मलाई दर्शकले किन चासो दिएनन्, त्यो गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
केही हप्ताअघि मात्र विवादमा आएपनि व्यावसायिक रुपमा सफल भएको फिल्म ‘प्रसाद’ ले भने दर्शकलाई केही हदसम्म राहत दियो । विपिन कार्की र नम्रता श्रेष्ठको अभिनयको पनि तारिफ भयो ।
त्यसपछि नम्रता त अर्को फिल्ममा देखिएकी छैनिन् । तर, विपिन अभिनित फिल्म ‘गोपी’ भने फ्लप भयो ।
एक फिल्मकर्मी भन्छन्, ‘हामीकहाँ बजार नबुझी फिल्म बनाउने चलन छ, फेरि यहाँ अलिकति जान्ने निर्माताहरुले अरुलाई मतलब गर्दैनन्, अपनत्व छैन ।’
उनको भनाइमा धेरैको सहमति किन पनि छ भने नेपालमा फिल्मकर्मीहरु गुट बनाएर अघि बढ्छन् । ती गुटमा जो छ, उसलाई समर्थन गर्छन्, अरुमा बोल्दैनन् ।
वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य भन्छन्, ‘हाम्रोमा फिल्म धेरै बने, यति धेरै फिल्म हाम्रो बजारलाई चाहिएकै छैनन्, दर्शकले रुचाएका कलाकार निकै छिटो फिल्मको पर्दामा देखिए ।’
फिल्मको यति वर्षे लामो इतिहास फिल्मकर्मीले भन्न पाए पनि बुझेर हेर्दा फिल्मको मार्केट जहाँको त्यहीँ भएर निर्माताहरु स्वीकार्छन् । जबसम्म धेरै फिल्मभन्दा राम्रा फिल्म बन्दैनन्, तबसम्म नेपाली फिल्मको बजार स्थूल बन्न गाह्रो देखिएको छ ।